Azerbaijan: Fihetsiketsehana noho ny fanagadrana ireo tanora mpikatroka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Janoary 2019 14:16 GMT
Ny Support Adnan and Emin (tohano i Adnan sy Emin) dia manazava ny antsipirian'ny fihetsiketsehana roa kasaina hatao eo ivelan'ny ambasadin'ny Repoblika Azerbaijan any Parisy, Frantsa, Londra, Angletera, ho fanohanana ireo tanora bilaogera an-dahatsary, Adnan Hajizade sy Emin Milli nogadraina. Nogadraina 2 taona sy 2 taona sy dimy volana an-tranomaizina tamin'ny fahavaratra teo izy roalahy, izay heverin'ny ankamaroan'ny mpanara-baovao fa fitsarana misy ambadika politika.
Niampanga ny didim-pitsarana ny Fiadidian'ny Vondrona Eoropeana, ny Antenimiera Parlementera ao amin'ny Filankevitr'i Eoropa (PACE), ny Fikambanana ho an'ny Fiarovana sy ny Fiarahamiasa any Eoropa (OSCE), ny Mpanara-maso ny Zon'olombelona ary ny Reporters Sans Frontières. Nanambara ny Amnesty International fa gadra noho ny fanehoan-kevitra izy roalahy. Ireo fihetsiketsehana roa ireo dia hotontosaina amin'ny 22 janoary ary tohin'ireo izay efa natao tamin'ny taona lasa.
Any Paris, hanomboka amin'ny 3 ora hariva ny hetsi-panoherana.
Mandritra izany, ny fihetsiketsehana ao Londra kosa dia hanomboka amin'ny 1 atoandro.
Ny tantara momba ny raharaha dia azo jerena ato amin'ny Global Voices: Caucasus 2009 Blog Review sy ao amin'ny Threatened Voices.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 3 andro izay